Monday August 06, 2018 - 20:42:09 in Wararka by Super Admin
Waxaa sii xoogeystay xiisadihii ka aloosnaa magaalooyinka waaweyn ee dhulka Somaligalbeed kadib markii melleteriga Itoobiya ay awood ku muquuniyeen mas'uuliyiintii ugu sarreysay maamulka dabaqoodhiga ah.
Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in xilkii madaxtinimo uu iska casilay Cabdi ileey oo maalmihii lasoo dhaafay uu khilaaf xooggan kala dhaxeeyay dowladda Itoobiya.
Axmed Ilkacase oo horay u ahaa wasiirka maaliyadda maamulka Jigjiga ayaa ku dhawaaqay in Cabdi ileey iscasilay islamarkaana isagu uu yahay madaxweynaha cusub ee waxa loogu yeero DDSI.
Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in kumanaan katirsan ciidamada melleteriga Itoobiya ay gudaha ugaleen magaalada iyagoo dad shacab ah xasuuqay.
Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya oo wata gaadiidka gaashaman ay ugu yaraan 5 qof ku toogteen bartamaha magaalada, maleeshiyaadka Liyuu Booliska loo yaqaan ayaa gabi ahaanba faarujiyay magaalada Jigjiga.
iscasilaaddan uu ku dhowaaqay Cabdi ileey iyo madaxweynaha lamagacaabay ayaa ah mid hal dhinac ah balse xukuumadda Addis Ababa oo dhulka Somaligalbeed xoog ku heysata ayaan tallaabadan taageersanayn.
Cabdi Maxamuud oo Cabdi ileey ku magac dheer ayaa ah shakhsi taariikh Madoow ku leh dhulka Soomaaligalbeed wuxuuna Tobankii sanadood ee udambeeyay xasuuq aan kala sooc laheyn kula kacayay shacabka ku dhaqan Soomaaligalbeed.
Ninkan dabadhilifka ah ayaa lagu xasuustaa sidii uu ugu baroortay Males Zinaawi R/wasaarihii dowladda Tigreega Itoobiya isagoo isbitaalka weyn ee magaalada Jigjiga ugu magac Daray Males.
Sidoo kale Cabdi ileey ayaa lagu xusuustaa gummaadkii uu maxaabiista Somaligalbeed ugu geystay Xabsiga Fadeexadda ku caanbaxay ee Jeel Ogaadeen loo yaqaan.
R/wasaaraha Itoobiya Abeey Axmed ayaa bilo ka hor qorsheeyay in uu xilka ka xayuubiyo Cabdi ileey, isbedelladan kasoo muuqanaya dhulka Somaligalbeed ayaa imaanaya xilli ay xiisado u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada ay ka socdaan mandiqadda oo idil.